အစိုးရတပ် ကချင်ရွာကို ပစ်ခတ်၊ ၂ ဦးသေ | ဧရာဝတီ
ကျော်ခ| December 4, 2012 | Hits:1
| | ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ကချင်ဒေသအတွင်း တွေ့ရသော အစိုးရ စစ်ကြောင်းတခု (ဓာတ်ပုံ – Kachinnet)
ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်းမြို့နယ်၌ အစိုးရ ရိက္ခာသယ်ယာဉ်တန်း ဖြတ်သန်းနေစဉ် လမ်းအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ယာဉ်တန်းက အနီးရှိ ကချင်ရွာ ၂ ရွာကို ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ရွာခံ ကျောင်းသားတဦးနှင့် ရွာသားတဦး သေဆုံးပြီး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း ရွာခံများက ပြောသည်။
ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည့် ရှဒူးဇွပ်နှင့် အောင်ရာ ရွာများသည် ကချင်တိုင်းရင်းသား အများစုနေထိုင်သည့် ရွာများဖြစ်ပြီး အောင်ရာရွာသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) ပါတီ ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဘောက်ဂျာ နေထိုင်ရာ ကျေးရွာဖြစ်သဖြင့် ပစ်ခတ်မှုများကို ကိုယ်တိုင် ကြားသိခဲ့ရကြောင်း ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အဲဒီအချိန်က ကျမ ရွာထဲမှာရှိတယ်။ သေနတ်သံကြားတော့လည်း ပုန်းနေရတာပေါ့။ ငြိမ်သွားမှ လိုက်ကြည့်တော့ ဟိုဘက်က ရှဒူးဇွပ်ရွာက အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် ဦးကွမ်ထက်နော် ဆိုတဲ့လူ ပွဲချင်းပြီး ဆုံးသွားတယ်။ မူလတန်း ကျောင်းသား ဖိုးချစ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကတော့ ပေါင်မှာ ကျည်ဆံထိတာ မြစ်ကြီးနားဆေးရုံသွားရင်းပဲ လမ်းမှာဆုံးသွားတာ” ဟု ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။
သေနတ်ဒဏ်ရာနှင့် နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားသော ဦးကွမ်ထက်နော်မှာ ရွာပြင်လမ်းမပေါ်တွင် ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပြီး မောင်ဖိုးချစ်နှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၃ ဦးမှာ ရွာထဲတွင် ပုန်းနေစဉ် ကျဉ်ဆံထိမှန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခု ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ထိုကျေးရွာ ၂ ရွာရှိ လူနေအိမ်များ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
စစ်ကား အစီး ၃၀ ခန့် ပါဝင်သော စစ်တပ်ယာဉ်တန်းသည် မြစ်ကြီးနားမှ တနိုင်းမြို့ဘက်သို့ လီဒိုလမ်းမကြီးအတိုင်း တက်လာစဉ် ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာအနီး အရောက်တွင် မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး အစိုးရတပ်များက အနီးရှိ ကျေးရွာများနှင့် တောများအတွင်း ပစ်ခတ်ခဲ့ရာမှ ရွာသားများ ယခုကဲ့သို့ ထိခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့က ကားအစီးရေ တွက်ကြည့်နေတုန်း ခနပဲရှိသေးတယ်၊ ပေါက်ကွဲသံကြားပြီး ပစ်တာ။ ပစ်တာကလည်း တဖက်တည်း။ အဲဒါလည်း ရန်သူကို ပစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ ရွာတွေဘက်ကိုပဲပစ်တာ အိမ်ခေါင်မိုးတွေ၊ ထရံတွေ၊ ဘုရားကျောင်းအမိုးတွေ အကုန်စုတ်ပြတ်ကုန်တယ်။ စစ်သားတွေက ဒီရွာတွေ ကြပ်ကြပ်သတိထား မီးပါရှို့ပစ်မယ်လို့ အော်သွားသေးတယ်” ဟု ရှဒူးဇွပ်ရွာသား တဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ စစ်တပ်ယာဉ်တန်းသည် ရှဒူးဇွပ်နှင့် အောင်ရာ ရွာများအနီး မရောက်မီ မနက် ၉ နာရီခန့်တွင် လီဒိုလမ်းမကြီးအနီး ကြက်ဥ တောင်တန်းတွင် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်သံများ ကြားရကြောင်း တနိုင်းမြို့နယ် ဝါရာစု ရွာသားတဦးကလည်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စစ်ယာဉ်တန်း ဖြတ်သန်းသွားမည့် လမ်းကို စစ်တပ်အစောင့်များ တရက် ကြိုတင်ချထားသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း၊ ယခုဖြစ်စဉ်တွင် လမ်းဘေးမှ ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် ဗုံးကြောင့် စစ်ယာဉ်တန်းကို ထိခိုက်မှု မတွေ့ရှိရကြောင်း၊ စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိမှု၊ အိမ်ခြေပျက်စီးမှုများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးမည့်သူ မရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခု နှစ်လည်ပိုင်းကလည်း ထိုနေရာတွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် အစိုးရစစ်ယာဉ်တန်း ပျက်စီး၊ သေဆုံးမှုများရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ရှဒူးဇွပ်နှင့် အောင်ရာရွာအနီး ပစ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှု မဟုတ်ဘဲ ကျေးရွာလူထုကို ပစ်ခတ်သွားမှုအပေါ် ရှုတ်ချကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ထိရောက် စွာ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။
“လက်နက်ကိုင် အချင်းချင်းပစ်တာ လယ်ကွင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ စိန်ခေါ်ပြီးပစ်ကြပါ။ အခုလိုရွာကို သက်သက်ကြီး ပစ်တာက ပြည်သူတွေကို သက်သက်ရန်ရှာနေတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်။ ကျမတို့ဒေသက ကချင်တွေ ပိုများတော့ တမင်ဖန်တီးတဲ့ ပုံစံလုပ်နေတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေထိုင်ရေးတွေ တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပေးရမယ့်အစား ဒီလုပ်ရပ်ဟာ တာဝန်မဲ့ရာ ကျလွန်းတယ်။ ဒါတွေဟာ ဦးသိန်းစိန် အပေါ်မှာ အဓိက တာဝန်ရှိတယ်” ဟု ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အတွင်း KIA ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသများသို့ အစိုးရ စစ်တပ်များက တပ်အင်အား၊ လက်နက်ခဲယမ်းနှင့် ရိက္ခာအင်အားများ တိုးချဲ့မှုများရှိနေသဖြင့် ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ တိုက်ပွဲများ အရှိန်မြှင့် လာဖွယ်ရှိကြောင်း အစိုးရတပ် အင်အားဖြည့်တင်းမှုများ ပြုလုပ်နေမှုကြောင့် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ကြားဖြတ် တိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏ ပြုလုပ်ခဲ့ရလေ့ရှိကြောင်း KIA နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) တို့က ပြောသည်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) နှင့် အစိုးရတို့ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများသည် ထူးခြားမှု မရှိသေးသော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်များနှင့် KIA တို့ အကြား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများ ကြောင့် KIO ထိန်းချုပ်မှု အောက်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၆၃၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ အားတက်ဖွယ် မရှိသေး“နောက်ကျော ဓားနဲ့ အထိုးခံခဲ့ရတာ”လွှတ်တော်တွင် စစ်တပ်က ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိသင့်သေးသည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောKIO ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများ စားနပ်ရိက္ခာ လိုအပ်စစ်တပ်က ရှမ်းရွာသားများပိုင် ပစ္စည်းကို သိမ်းသလား နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Maung Myo December 4, 2012 - 11:51 pm	They should use patrol planes not hurting for villagers.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 5, 2012 - 3:09 am	အခုက ကေအိုင်အေကို မနိုင်လို့ ကချင်ရွာတွေကို အညှိုးတကြီးနဲ့ မဲပစ်သွားတာ၊ လူမဆန်ဘူး။
ယောက်ျားမှန်ရင် သေနပ်ကိုင်သူချင်း သူသေ ကိုယ်သေ ဆော်ကြပေါ့။ အလကားနေရင်း ကြားထဲက ရွာတွေပဲ လာ အနိုင်ကျင့်နေကြတယ်။
Reply	Salai Lian December 5, 2012 - 3:09 am	Hlutdaw member Daw Bauk Ja herself was there and she will surely bring it to the attention of Daw Suu who is chair of Rule of Law Committee. These lawless soldiers will be punished severely. Shooting at villages withoutareason is so horrible.
Reply	La December 19, 2012 - 5:22 pm	Tatmataw has been acting brutally for2decades in ethnic rural areas but no news of punishing lawless soldiers is ever heard. The leaders themselves are lawless how can their soldiers be good. Daw Suu can’t do anything as of now. so sad.
Reply	sunny December 5, 2012 - 7:38 am	This isacoward act from burmese army. They only know how to bully the villagers who donot have weapons. We all know how they react when they face KIA or other groups.
Reply	Maung Myo December 5, 2012 - 11:16 am	How are you afraid to speak about KIA’s killing
or kidnapping to people?
Reply	GL December 5, 2012 - 11:22 am	don’t just blame one side. Be rational. From my point of view both side should equally blame for what happened.
It’s very clear that KIA strategy is to wage Guerrilla warfare. Blended with civilian , sneak out and planted the mine.
If you were the government solider what you gonna do? I’m not taking sides , just stating the facts.
I hate the war deep down from my heart. Hope Myanmar peoples could have better life and prosperity.
Reply	swe htwe December 5, 2012 - 6:40 pm	Both sides are to be blamed. Tatmataw should not fire in uncontrolled manner and KIO should should not blast around the village. If they have courage,they should fire one by one just like cowboys. People are only suffering.
Reply	1 December 5, 2012 - 7:15 pm	“လက်နက်ကိုင် အချင်းချင်းပစ်တာ လယ်ကွင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ စိန်ခေါ်ပြီးပစ်ကြပါ။ အခုလိုရွာကို သက်သက်ကြီး ပစ်တာက ပြည်သူတွေကို သက်သက်ရန်ရှာနေတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်။ ကျမတို့ဒေသက ကချင်တွေ ပိုများတော့ တမင်ဖန်တီးတဲ့ ပုံစံလုပ်နေတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေထိုင်ရေးတွေ တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပေးရမယ့်အစား ဒီလုပ်ရပ်ဟာ တာဝန်မဲ့ရာ ကျလွန်းတယ်။ ဒါတွေဟာ ဦးသိန်းစိန် အပေါ်မှာ အဓိက တာဝန်ရှိတယ်” ဟု ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။ မှန်တယ် ဦးသိန်းစိန် တာဝန်ယူရမယ်
Reply	mgyeyint December 21, 2012 - 10:10 am	We should think about both sides. As for government, instead of shooting at villages where ethnic groups, They must provide Job opportunities for ethnic groups . Also as for KIA, instead of making blasting on railways , roads , bridges and near villages , they must support and provide Kachin people’ peace.
If so, the world will beabetter place for us.
Reply	swe htwe December 5, 2012 - 11:57 pm	We think both sides are to be blamed. Tatmataw should not fire in uncontrolled manner and KIO should not blast around the village.Onlypeople are suffering.
Reply	bohmue December 6, 2012 - 2:03 pm	ဘယ်လိုနားလည်ရမယ်မှန်းကိုမသိဘူး ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ
Reply	KoKoGyi December 7, 2012 - 1:02 am	I do not like to fire arms less people.what i write is wrong.
Reply	ကျွဲကျောင်းသား December 7, 2012 - 4:52 pm	အလကား သောက်ပေါကောင်တွေ..စစ်သားဆိုရင် စစ်သားပြီပြီ သတ္တိရှိရှိ ၇န်သူနဲ့ ထိတ်တိုက် တေပစ် ကြပါလား..အခုတော့ ဘာမဆိုင်တဲ့ ရွာသားတွေကို သွားဒုက္ခပေးရတယ်လို့…ကြားရတာ နားရှက်တယ်..
Reply	တခြားဖတ်စရာများ ဟတ်ကြီး ရေကာတာ စီမံကိန်း လေ့လာခွင့်ပြုရေး KNU အစီအစဉ် ရှိ